Madheshvani : The voice of Madhesh - लकडाउन अबको विकल्प होइन : उदयकुमार बरबरिया यादव
उदयकुमार बरबरिया यादव, मेयर, शहीदनगर नगरपालिका, धनुषा
० दिनप्रति दिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ, शहीदनगर नगरपालिकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणमा के गरिरहेको छ ?
— निश्चय नै मुलुक अहिले कोभिड–१९ को त्रासमय अवस्थामा छ । जसमा पनि प्रदेश नं. २ र खासगरी मैले नेतृत्व गरेको शहीदनगर नगरपालिका पनि बढी प्रभावित भएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हामीले नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा केही चिकित्सकहरु राखेर एउटा टीम गठन गरेका छौं । चिकित्सकसहितको त्यो टीमले क्वारेन्टाइनमा रहेका र घरमा रहेकाहरु बारे बुझ्ने, उपचार गर्ने, आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने लगायत सम्पूर्ण कार्य गरिरहेको छ । हामीले समय–समयमा प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं । क्वारेन्टाइनमा खटिरहेका चिकित्सकहरुका लागि पनि हामीले जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरेका छौं । यस नगरपालिकामा सुरुमा कोरोनाको पोजिटिभ केशहरु धेरै आएका थिए, त्यसपछि आइसोलेसनमा राखिएपछि निको भएर घर पनि फर्किसकेका छन् । यस नगरपालिकामा कोरोनाबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
० सुरुवाती अवस्थामा बढी जोखिम हुँदा पनि अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको हो ?
— अहिले शहीदनगर नगरपालिका जोखिममा छैन । अहिले अवस्था सामान्य भइसकेकोले सञ्चालन गरिएको क्वारेन्टाइनलाई बन्द गरेर नेपाल सरकारको निर्देशिकाअनुसार ५ बेडको आइसोलेसन निर्माण गर्नेतिर लागेका छौं ।
० कोरोनालाई नियन्त्रित अवस्थामा राखिराख्न के कस्ता उपायहरु अपनाइरहनु भएको छ ?
— कोरोनालाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न मुख्य कुरा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ । हामी सरकारको मात्रै भरमा पर्नु हुँदैन । नागरिक आफै सचेत नभएसम्म हामीले कोरोनालाई जित्न सक्दैनौं । किनभने यो कोरोना भनेको एउटा अदृष्य शत्रु हो । यो शत्रुलाई कुनै पनि सरकारले बल प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै उपाय गरेर रोक्न सकिँदैन । यसलाई रोक्नका लागि हरेक नागरिक आफै सचेत भई विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै हामी कोरोनामाथि विजय हासिल गर्न सक्छौं । किनभने अहिले कोरोना विरुद्ध कुनै पनि खोप वा औषधि आइसकेको छैन । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लामो समयसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा पनि ग¥यो । तर लकडाउनले अवस्था झन् बिग्रन थालेको थियो । समयमै सतर्कता अपनाउन सकेनौं भने हामीले धान्न अप्ठ्यारो हुन्छ । अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल भई युनिटी, कन्टिन्युटी र डिउटी गरियो भने कोरोनालाई रोक्न हामी सफल हुन्छौं ।
० युनिटी, कन्टिन्युटी र डिउटीमा तीनै तहको सरकार कतिको गम्भीर छ ?
— निश्चय नै हामीसँग उपलब्ध भएका साधनस्रोतअनुसार लागिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि आफूसँग भएका बजेट र स्रोतसाधन उपयोग गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि राम्रै तरिकाले समन्वय भइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि यो बेलामा सातै प्रदेशसँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ । हाम्रो नगरपालिकामा प्रदेश सरकारले एकदमै सहयोग गरिरहेको छ ।
० तर, प्रदेश सरकारले त संघीय सरकारले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो पोखिरहेको हुन्छ नि ?
— यसमा म विल्कुल सहमत छैन । किनभने प्रदेश सरकार आफैमा एउटा सरकार हो । प्रदेश आफैले नीति निर्देशन र कानूनहरु बनाइरहेको हुन्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि फालमफाल बजेटहरु छन् । संघीय सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो कि प्रदेश सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्नुस् । कोभिडसँग लड्न संघीय सरकारले सहज गरिदिएको थियो । त्यस्तै, हामीले पनि विकासको बजेटलाई कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगायौं । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्दथ्यो । कुनै पनि सरकारले एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । हामीले गर्न सकेनौं भने त्यसको दोष प्रदेश सरकारलाई हामी दिन सक्दैनौं । म एउटा स्थानीय तहको प्रमुख हुँ, यदि मैले गर्न सकिन भने त्यो मेरो कमजोरी हो । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले यदि गर्न सकेन भने यसको दोष संघीय सरकारलाई दिन मिल्दैन । समग्रमा सबैले एक अर्कासँग सहकार्य र समन्वय गरी यो महामारीको विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० अब फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने सुझावहरु आइरहेको छ, तपाइँको धारणा के छ ?
— अब लकडाउन गर्नु हुँदैन, हामी सतर्कता अपनाउनुपर्छ । अब हामीले ठोस नीति निर्देशन ल्याएर कोरोना रोकथामका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । अब हामीले कोरोनासँगै बाँच्न सक्नुपर्छ । किनभने अहिलेसम्म कुनै औषधि वा खोप नआइसकेकोले एक दुई वर्ष हामी सचेत भएरै बाँच्नुपर्छ । यत्रो समयसम्म यदि हामीले लकडाउन ग¥यौं भने देशको अर्थतन्त्र झन् धरासायी हुन्छ । त्यसकारणले अब हामी कोभिड सँगसँगै आफ्नो दैनिक कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।
० दिनप्रति दिन जोखिम बढ्दैछ, संक्रमित पनि बढ्दै गएको छ नि ?
— नेपालमा कोरोनाको अवस्था हेर्दा मृत्युदर एकदम कम छ । यसलाई महामारीको रुपमा लिनुभन्दा पनि यसलाई एउटा रोगको रुपमा हेर्नुपर्छ । नेपालमा निश्चितरुपमा संक्रमितहरु दिनहुँ बढिरहेका छन् तर उपचार पनि निको हुने दर पनि बढी नै छ । अन्य मुलुकभन्दा नेपालका नागरिकहरुमा इम्युनिटी पावर अलि बढी छ । हामी आफ्नो इम्युनिटी पावर बनाउने खानपानमा बढी जोड दिनुपर्छ । भनेपछि पूर्ण सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो जनजीविका अगाडि बढाउनुपर्छ, लकडाउन अबको विकल्प होइन ।